I-RAI COTTAGE - iDeluxe - I-Airbnb
I-RAI COTTAGE - iDeluxe
Ifama sinombuki zindwendwe onguDr Shashikanth
UDr Shashikanth yi-Superhost
“I-RAI COTTAGE” ibekwe phakathi kwendawo entle yekofu engeyonto imfutshane kwiparadesi. Le ndawo iphakathi kweehektare ezi-4.5 zentsimi yekofu, indawo efanelekileyo yokubaleka kubakhenkethi kunye nabahambi.
Ikumgama oziikhilomitha ezi-2 kuphela ukusuka kuHola weNdlela
Isantya se-WIFI siphuculwe ukuya kwi-100 MBPS
Ukongezwa kwiCottage yeDeluxe SineSuite Cotage 1 & 2, esecaleni kwayo ephangaleleyo kwaye inokwamkela iipaksi ezi-5 kumagumbi ngalinye. Iindwendwe ezifikelela kwi-15 zizonke ziyakwazi ukuhlala xa kusetyenziswa izindlu ezi-3.
"I-RAI COTTAGE" ifakwe phakathi kwendawo enhle yekhofi, le ndawo ayikho into emfutshane yeparadesi. Le propathi iphakathi kweehektare ezi-4.5 zentsimi yekofu yeyona ndawo ifanelekileyo yokuphumla kubakhenkethi nabakhenkethi. Umtsalane we-rustic wepropathi wongezwa yimpepho epholileyo kunye nohlaza oluluhlaza macala onke. Inika amagumbi abanzi, acocekileyo agcinwe kakuhle kwaye axhotyiswe ngazo zonke izinto eziyimfuneko ezisisiseko. Ngaphaya koko, khupha imizimba yakho kwimizimba yakho kunye nokutya okumnandi okwenziwe ekhaya.
Iziqholo zasekhaya ezikhuliswe malunga ne-cottage zikunika ulonwabo lobomi kwaye zivuselele iimvakalelo zakho. Kwaye ebusuku, yonwabele imozulu ebandayo phantsi kwesibhakabhaka esineenkwenkwezi ecaleni komlilo omkhulu. Unokukhenketha indawo yekofu kwaye uvuyise iimvakalelo zakho ngevumba leentyatyambo kunye nokuntyiloza kweentaka ecaleni kwendlela eluhlaza. Ifanelekile kwiholide yokuphumla. Ngaphezu koko, i-homestay ibonelela ngamava akhethekileyo kuye nabani na ongathanda ukufumana, amava obuqu kwiinkqubo zokulima ikofu kunye neziqholo, okanye ukhenketho olulula lwamasimi. Umamkeli-zindwendwe ngokwakhe ngumlimi okhutheleyo, ogcina amasimi akhe ekofu, ipepile, ipaddy, iibhanana, iorenji neminye imithi evelisa iziqhamo zasendle, phakathi kwekofu.
Uphahla olufakwe iithayile zodongwe, izitena ezinomtsalane ezibomvu, kunye nembonakalo entle engasemva esecaleni kwayo iya kukwenza ukuba uwe kule ndawo. Uhlaza kunye namasimi agcina wonke lo mmandla upholile kwaye uzolile unyaka wonke.
Indawo yayo epholileyo ejikelezwe sisityalo sekofu kunye nohlaza olujikelezayo..Indawo ehloniphekileyo kwaye izolile..Indwendwe inokuyonwabela indawo ecocekileyo neluhlaza..Uphononongo ngokwalo luya kukuchazela.
Umbuki zindwendwe ngu- Dr Shashikanth
Iindwendwe zikhululekile kakhulu ukuba ziqhagamshelane nathi njengoko sihlala iiyadi ezimbalwa ukusuka kwi-cottage.. Iindwendwe zikhululekile ukusebenzisa yonke impahla ngexesha lokuhlala.